Uthi akasalali owebelwe usana olunosuku luzelwe - Ilanga News
Home Izindaba Uthi akasalali owebelwe usana olunosuku luzelwe
Uthi akasalali owebelwe usana olunosuku luzelwe
‘Amasela abaleke ngemoto yohlobo lweVW Polo e-silver grey’
AKASABUTHI quthu umlisa waseJozini owebelwe usana.
AKUSAVUMI nokuba adle noma alale owesilisa waseMamfene, eJozini, okwebiwe ingane yakhe inosuku olulodwa izelwe, emuva kokuba unina eyiphathise omunye wesifazane, owagcina engene emo-tweni eyiVW Polo e-siver grey, yakhala amaphepha, ngoLwesibili olwedlule.
UMnu Mbongiseni Mkhwanazi, uthi lesi sigameko simephule inhliziyo ngendlela eyisimangaliso, kwazise bekuyingane yakhe yokuqala lena kuNkz Phumzile Gina (36), owabelethela esibhedlela iBhethesda kule ndawo.
“Bekuyingane yami yokuqala lena kuyena. Ngesikhathi esaya esibhedlela wayephelezelwa ngudadewabo ngoba mina ngisemsebenzini KwaMbonambi.
“Ngangizitshela ukuthi noma esebuya, udadewabo uzomhlanga-beza kanti uzohamba yedwa.
“Umama ongizalayo ubesazoya kubo kamama wengane eyozwa ngalo mhlola osivelele. Akuvumi nokuthi ngidle ngendlela umoya wami ohlukumezeke ngayo,” kusho uMnu Mkhwanazi.
UNkz Gina uthi wabeletha inga-ne yomfana eyashaya u-2.5kg esikalini, okwathi uma esephuma, walandelwa ngowesifazane aye-mbonile ngaphakathi esibhedlela, waficana naye esitobhini walokhu emxoxisa.
Uthi lona wesifazane owazibiza ngoGugu Mabaso, wathi uzalwa nguMaMbatha wakwaMabaso eZi-nqaweni – okuyindawo ayaziyo – wazitshela ukuthi bangabasenda-weni eyodwa, yize behlukene nge-zigodi.
“Wacela ukungibambela ingane, ngamnika, ngahlala phansi ngadla ipapa nenyama yengulube, enga-ngikuthengile. Kwathi uma ngiqeda ukudla, ngithi ngiyolahla udoti, wangitshela ukuthi ngingcolile ngemuva esiketini, kunegazi, se-ngathi ngingathola indawo engi-ngazihlanza kuyona ibhasi linga-kafiki.
“Ngaya endlini yangasese enga-phandle kwesibhedlela, okwathi uma ngizibheka ngathola ukuthi kanginalutho, ngabuyela emuva ngamfica esahleli nengane,” kusho uNkz Gina.
Uthi lafika ibhasi bagibela bo-babili, okwathi uma sekufanele ehle axhume ezimotweni eziya ngakubo, nalona wesifazane wehla esaphethe ingane.
“Kwathi sisamile nje, kwaqhamuka iPolo e-silver grey, ishaye-lwa ngowesilisa. Lona wesifazane waya kuyona njengomuntu oyobuza ukuthi ingabathatha yini, wave-le washo phakathi nengane, yakha-la amaphepha.
“Ngasala nesikhwama esinekhadi lomgomo nencwadi esikhishwe ngayo esibhedlela,” kusho uNkz Gina othi washayela amaphoyisa, amtshela ukusa aye esiteshini ayovula icala.
Uthi waya, wafike walivula. Ngokusho kwakhe le ngane entshontshiwe bekungeyesithu-pha ezinganeni zakhe, okungamadodakazi amathathu namadodana amabili.
Uthi wamazisa uyise wengane ngokuntshontshwa kwayo, kodwa wakhombisa ukungayizwa kahle le ndaba, wabuza ukuthi yayisuke kanjani ezandleni zakhe.
“Akusadleki ngisho ukudla, ubuthongo selokhu ngabugcina esibhedlela,” kusho uNkz Gina.
Uthi ingane yakhe ibikhanya ngebala, kanti lona wesifazane oyithathile naye ubekhanya, ene-zinwele ezinde, esho ngezitho.
“Ngicele kunona ngubani onga-ngisiza ngithole umntanami,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe udaba lokulahleka kwengane lubikiwe, luphenywa wuphiko lwa-maphoyisa olubhekelele udlame lwemindeni, wukuvikelwa kwaba-ntwana namacala ocansi.
“Sicela noma ngubani ongaba nolwazi athinte uSerg Hadebe waseteshi samaphoyisa aseJozini ku:079 902 6088 noma 0860010111,” kusho uCapt Gwala.
Previous articleUzibangele isigcwagcwa umqeqeshi we-Pirates
Next articleKwenyuke izimendlela kobehlahla umoba